Mgbasa Ozi Obodo na Ọnọdụ | Martech Zone
Wednesday, December 12, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịgbaso ihe niile ahia jargon ụbọchị ndị a, mana nke a bụ nke ọzọ ị nwere ike ịmalite ịnụ… nwa afọ mgbasa ozi.
Usoro ahụ nwa afọ mgbasa ozi na-enweta nnukwu ndọtị na obodo mgbasa ozi n'ịntanetị, mana nkọwa ya gbagwojuru anya ruo ugbu a. Mgbasa ozi nke ala abụghị nke mkpọsa. Kama nke ahụ, ọ na-enyere uru na ibe ọ bụla ọ bara uru site na imeziwanye ahụmịhe onye ọrụ yana ịgbakwunye uru maka ndị na-azụ ahịa. Adịbeghị anya data kwenyere na ndị mbipụta, ụlọ ọrụ, ndị na-ere ahịa na ndị na-etinye ego kwenyere na mgbasa ozi ala bụ ngalaba na-eto ngwa ngwa na azụmahịa mgbasa ozi n'ịntanetị.
Solve Media edeela a whitepaper ọ bụrụ na ịchọrọ nghọta ọzọ banyere mgbasa ozi ala.
Nke a bụ ihe atụ nke mgbasa ozi ala sitere na saịtị Solve Media, ụdị CAPTCHA:
Tags: CAPTCHA -dị-INnwa afọ mgbasa ozi
Chase 2012 Holiday Shopping Stats ruo ụbọchị